VAKY BANTSILANA : Fa ahoana ihany e ? | NewsMada
Par Freenews sur 17/05/2017
Mitsitotongana andro aman’alina ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao. Manoloana izany, mangina tsy misy miteny ny tompon’andraikitra rehetra eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Tsy mitotongana manaraka izany anefa fa toa miakatra isan’andro ny vidim-piainana. Saika mitaraina avokoa ny rehetra, miha-mahantra isan’andro ny vahoaka. Tsy misy andry iankinana intsony ary toa maty momoka tery ny fanantenana tamin’ny fifidianana ilay « Hery Vaovao ». Tena nitombona ny tenin’ilay kandida nilatsaka filoham-pirenena tamin’ny fahitalavitra iray tamin’ny fampielezan-kevitra tamin’ireny fotoana hoe “tsy vaovao ianao amiko fa tonta”.
Dia tena tonta tokoa, satria ny teo ihany no nivadibadika. Tsy nisy niova ny fomba fitantanana fa toa vao maika aza niha-ratsy andro aman’alina ny fiainan’ny Malagasy izay voky fampanantenana tsy misy. Dia ho avy indray ny fifidianana, antenaina fa efa leom-boan’anana tamin’ny fampanantenana tsy misy natao azy hatramin’izany ny vahoaka ka ahay handanjalanja tsara ny olona ho fidiany filoham-pirenena.
Ny antenaina dia feom-bahoaka marobe no iaraka hitabataba amin’ny fandatsaham-bato hoe “leo ny lainga sy ny fitaka ataonareo izahay ka vato efa voahevitra ity arotsakay ity”. Mazava araka izany fa any amin’ny fifidianana ihany no vahaolana raha tena hitady fandrosoana sy fanovana marina. Tompon-tsafidy amin’izay fotoana izay ny vahoaka izay tompon’ny fahefana. Aza heverina izay mety ho halatra ataon-dRabe na Rasoa fa ny andraikitra no mila raisina, ny ho avin’ny taranaka no mila tsinjovina.
Raha ny zava-misy amin’izao mantsy dia ataon’ireo mitana izany fahefam-bahoaka izany antsojay ireo olona nampindrana izany ho azy. Ny fanjakan’ny manaiky matoa tsy miteny no manjaka eto ka izay olona akaiky, fianakaviana sy ny mpilelaka kiraro ihany no mahita fa mety izao fitantanana izao.
Ny mahavariana ihany koa, tsy mety tonga saina amin’ny zava-mitranga, toa miendrika fambara, maro isan-karazany eto amin’ny tany sy ny fanjakana ireo milaza azy ho tompon’andraikitra. Fa ahoana ihany e? Tsy fara-pidiny akory ny vahoaka Malagasy fa mbola ho avy ny fotoana…